Backing aad xiriirada blackberry iyo macluumaad kale waa tallaabo muhiim ah in la ilaaliyo xogta aad lacala waxaa laga badiyay ay sabab u tahay nidaamka failure ama qalad software. Intaa waxaa dheer, dhowr jeer inta lagu jiro formatting, waxaa laga yaabaa inaad lumiso xiriirada aad u kasayn, oo ma jiraan fursado badan si ay u soo ceshano. Habka ugu fiican ee aad u dooran kartaa waa in ay dib u kor xogta aad si aad u yeelan karaan in ay helaan xog muhiim ah ama xitaa iyaga wareejiyo qalabka kale.
The benefits of taageero aad xiriirada blackberry iyo macluumaad kale oo ku jira in ay tahay si degdeg ah oo hufan halka oo dhan. Waxa aanu qaadan muddo dheer in ay dib u kor xogta iyo aad u soo celin kartaa click ah badhan. The files xoojiyaa badbaadi kara in aad kombuutarka ama qalab kale. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad dib kartaa ilaa aad xiriirada blackberry iyo ugu caansan waxaa ka mid ah iyaga oo isticmaalaya Manager Blackberry Desktop ah.
Qeybta 1: Xiriirada Blackberry kaabta Maamulaha Blackberry Desktop
Qeybta 2: Saxiixa Blackberry Xiriirada inay iPhone ama Android Devices
Tababare Blackberry Desktop waa fududahay in la isticmaalo software in kaabta iyo soo celinta aad xiriirada iyo macluumaad kale oo si qalab kale. Waxay ka dhigaysa mid ammaan ah oo nuqul ka mid ah oo dhan xog muhiim ah oo ay bixisaa oo aad ka heli waa in mar walba. Waxa kale oo aad u ilaalin karaa sirta ah (in la adeegsan imayl) si ay xogta aad weli ammaan ka mid indhaha la rabin. Waxaa jira versions kala duwan si ay software iyo ka hor inta aanad hore u socon mid la hubiyo in ay tahay la jaan qaada qalabka aad leedahay. Inta badan versions ku leeyihiin geeddi-socodka la mid ah taageero - ilaa iyo soo celinta xog gaar ahaan xiriirka laakiin qaar ka mid ah tallaabooyinka kala duwan oo laga yaabo. Waxaan la isticmaalayo mid ka mid ah qoraalkii ugu horumarsan ee software - Maareeyaha Desktop Blackberry 6.0 for PC. Tallaabooyinka isku mid ah ayaa sidoo kale version 7.1 oo ku dhowaad mid ah nuquladii hore.
Tallaabooyinka soo socda ayaa u baahan in la raaco si loo isticmaalo software iyo xogta ee kaabta -
1. Isku aad blackberry in aad PC ama qalab kale oo lagu dhegeysan.
2. Open Software Blackberry Desktop iyo guji Device markaas Back up.
3. Riix Full (dhammaan xogta qalab iyo goobaha) si ay dib dhan xogta qalab.
4. Riix badhanka Back ilaa iyo barkinta casriga ah marka nidaamka dhameystiray.
5. dib file xogta ku badbaadi doontaa in aad folder Documents.
Waxa kale oo aad sir kartaa file dib ay u ilaalinta sirta ah si ay u lahayn mid kale oo aad u badan u helaan in ay yeelan karaan. Haddii aad illowdo in aad dib ilaa qalab aad hadda kasta ka dibna, waxaa jira si toos ah dib ugu feature sidoo kale la heli karaa si fudud ayaa kaa caawin kara.
Files aad xoojiyaa aad PC ama qalab kale waa nuqul ka mid ammaan ah oo dhan xog muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, ma aad arki kartaa faylasha, kuwaas oo aad kombuutarka ama qalab kasta oo kale marka laga reebo Blackberry casriga ah. Maxaa dhacaya haddii aad rabto in aad beddesho aad telefoon u dambeeyay telefoonada iPhone ama Android? Sidaa awgeed, waxaa muhiim ah in la soo celiyo data si qalab kale oo aad si fudud u samayn kartaa adigoo isticmaalaya software soo celinta sida Wondershare Mobiletrans . Software Tani waxay sidoo kale ku caawin doona in ay si fudud u gudbiyaan xogta aad ka telefoonka ah oo gaboobay in telefoon cusub.
Bedelka content dhexeeya iDevice, Android oo Symbian telefoonada 1 click
Bedelka xiriirada ka Motorola si iPhone, iyadoo horyaalka shaqo, cinwaanka email iyo in ka badan info.
Beddelaan oo nuqul ka audio iyo video inay iPhone, waxba laga saaro adiga ku iPhone.
Dhaqaaq fariimaha qoraalka ah, jadwalka iyo sawiro ku Motorola si iPhone aan JAILBREAK
La jaan qaada iPhone 6, iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, Motorola Moto X, Motorola Droid RAZR, iyo in ka badan .
Wondershare MobileTrans kaa caawinaysaa in aad si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha oo warbaahinta ka mid ah aalad si kale oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa xiriirada, fariimaha, xitaa wac abuse oo dhan. Waxayna u shaqaysaa iyadoo Android, OS iyo xitaa soo tebiyaan Symbian. All inaad samayso waa raaco xoogaa tallaabooyin ah oo aad samaysay. Tani waxay si fiican u shaqeeyaa haddii aad rabto in aad si ay u gudbiyaan dhammaan xogta laga telefoonka jir in aad telefoon cusub. Intaa waxaa dheer, waxa fiican in ay dib ugu wareejiyo ilaa files in qalab cusub oo ay dhacdo in nidaam ama qalad failure software. Halkan sida ay u shaqayso -
Tallaabada 1 - Connect labada qalabka si aad u computer ah
Connect labada qalabka ay u kombiyuutarka sida mid ka xogta loo wareejiyey oo kale, taas oo xogta loo wareejiyey. Markaas rakibi oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans ah. Riix badhanka Start si ay u galaan telefoonka inay tab kala iibsiga phone oo software si toos aqoonsan doonaa qalab aad ayaa soo qabanqaabinayay kombiyuutarka. Haddii aanay aqoonsanayn qalabka markaas iyaga remve oo iyaga mar kale ku xidhmaan kombiyuutarka.
Tallaabada 2 - bilow wareejinta xogta ka mid phone in kale
Software uu baaritaanku phone il iyo Liiska doonaa dhamaanba alaabta in la koobiyeyn karaa oo loo wareejiyay aad telefoon kale. Liiska waxa ku jiri lahaa waxyaabo la mid ah xiriirada, fariimaha qoraalka ah, warbaahinta (images iyo videos) iyo xataa codsiyada. Si fudud Waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto in aad dib u soo ceshano iyo kala iibsiga. Markaas riix badhanka Start Copy oo ay si toos ah guuriyeen doonaa in aad telefoon kale oo aan ka kaaftoomi kasta.
Oo kuwanu waa labada siyaabaha ugu caansan inay xog ka blackberry wareejiyo kale. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in sidoo heli qaababka kale. Waxaa jira sidoo kale Softwares kale oo kala duwan caawinaad in hawl isku mid ah iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa tijaabooyin lacag la'aan ah oo la mid kasta oo iyaga ka mid ah.
10 Best Windows Phones 2015
> Resource > Top List > Sida loo kaabta Xiriirada Blackberry iyo wareejiyo Qalabka Kale